Vavaka hahombiazana amin'ny taona 2021 | TOKO VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Vavaka hahombiazana amin'ny taona 2021
Vavaka hahombiazana amin'ny taona 2021
Androany isika dia hiatrika ny vavaka mba hahombiazana amin'ny 2021. Andro vitsivitsy sisa dia hiala ny taona vaovao. Afaka roa andro izao dia hankalaza taona vaovao izao tontolo izao. Zava-dehibe ny manomboka mivavaka ho an'ny taona vaovao manomboka izao. Isan-taona dia manana ny fitahiany, ary mitaky ireo izay efa niomana ho azy mba ho afaka hiditra amin'ny fitahiana amin'ny taona vaovao.
Ho gaga ianao amin'ny fahafantarana fa na eo aza ny traikefa nahafinaritra tamin'ity taona 2020 ity dia nisy olona sasany nanana fotoana tsara indrindra tamin'ny fiainana tamin'ity taona ity. Izany dia manazava fa na ratsy na kely aza ny herintaona dia misy ihany ny fitahiana miafina ao. Amin'ny maha mpino antsika dia mametraka ny tenantsika amin'ny toeran'ny vavaka isika. Rehefa mijanona eo amin'ny toeran'ny vavaka isika dia ho tonga amin'ny toerana tsy misy ezaka firy ny zavatra.
Tsy manaitra ny fahombiazana. Ho an'ny ankamaroantsika izay manana fahaizana na asa ho an'ny olona, ​​rehefa tonga amintsika ny fahasoavan'ny fahombiazana dia mahomby amin'ny zavatra rehetra ataontsika isika. Ny soratra masina dia milaza fa ny soa sy ny famindram-po dia hanaraka ahy amin'ny andro rehetra hiainako. Mamindra amin'ny alàlan'ny famindram-pon'ny Avo Indrindra aho, eo am-panaovanao ny taona 2021, ho aminao ny fitahian'Andriamanitra Tsitoha amin'ny anaran'i Jesosy.
Hoy ny soratra masina: jereo ny olona mazoto amin'ny asany; hijoro eo anatrehan'ny mpanjaka izy fa tsy olona. Ny fahasoavana mba hahomby, mandidy aho fa halefan'ny lanitra aminao anio amin'ny anaran'i Jesosy. Ao amin'ny bokin'ny Genesisy 26: 12 Ary Isaka namafy tamin'izany tany izany, dia nijinjana zato heny tamin'izay taona izay. Notahin'i Iaveh izy. Rehefa ny fitahian'ny Tompo amin'ny olona dia tsy maninona na oviana na taiza no nafafiny, ny fitahian'Andriamanitra dia hahatonga azy hijinja be. Ny fahasoavana ho ambony noho ny mpiara-belona aminao dia manome didy aho fa halefan'Andriamanitra aminao anio amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, manandratra ny anaranao masina amin'ity andro mahafinaritra ity aho; Misaotra anao aho tamin'ny fitsimbinana ny fiainako hahita andro iray hafa mahatalanjona nataonao. Tompoko, hisandrata amin'ny anaran'i Jesosy ny anaranao.
Ry Tompo Andriamanitra ô, tonga eo anatrehanao anio aho hivavaka mba hahazo fitahiana tondraka amin'ny taona 2021. Tompoko, mangataka aho amin'ny famindram-ponao mba homenao ahy ny fahasoavana hahomby amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, tonga aho nanohitra ny hery rehetra izay nahatonga ny fiezahako ho tsy misy ilana azy amin'ny taona 2020; Mivavaka aho mba tsy hiaraka amiko hiaraka amin'ny taona 2021 amin'ny anaran'i Jesosy izy ireo. Tompoko, ny hery rehetra manelingelina ny ezaky ny olona, ​​tonga hanohitra anao aho anio amin'ny anaran'i Jesosy.
Andriamanitra Andriamanitra ô, ny soratra masina dia ny fitahian'ny Tompo no mampanan-karena ary tsy manampy alahelo. Tompoko, mivavaka aho mba hitahianao ahy amin'ny 2021 amin'ny anaran'i Jesosy. Manosotra ny tanako amin'ny Fahombiazana aho. Izay rehetra ametrahako tànana amin'ny taona 2021 dia hambinina amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompo, ny bokin'ny Malakia 3:12, dia hataon'ny firenena rehetra hoe sambatra; fa ho tany mahafinaritra ianao, hoy Jehovah, Tompon'ny maro. Mandidy aho fa ny firenena dia hanohana ahy amin'ny 2021 amin'ny anaran'i Jesosy. Tompoko, ny taniko tsy ho lao intsony amin'ny anaran'i Jesosy, ny fahefana hihoatra, ny fahasoavana hahomby, manapa-kevitra aho fa tonga amiko io amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray Tompo ô, mivavaka aho mba hitahianao ny tanako hahita fahombiazana lehibe, satria hoy ny soratra masina fa ireo izay mahalala an'Andriamaniny dia hahery ary hitrandraka. Mandidy aho amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra, ny fahasoavana hanao fanararaotana lehibe dia tonga tamiko tamin'ny 2021 tamin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, ny zavatra tsara rehetra nenjehiko tamin'ny taona 2021, ny zavatra tsara rehetra notadiaviko ho azo tamin'ny taona 2021, saingy tsy afaka aho, mivavaka aho mba hamotsoran'ny famindram-ponao ahy amin'ny 2021 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fahasoavana hahatratra zavatra lehibe tsy misy adin-tsaina, ny fahefana hahomby amin'ny zavatra rehetra, raiko, mivavaka aho mba hitondranao izany amiko amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, tonga hamely ny biby demonia rehetra mametra ny fahombiazako tamin'ny taona 2020 aho; Manohitra azy ireo aho amin'ny taona 2021. Ny hery mametra rehetra izay namepetra ahy tsy hahatratra ny fahalehibiazana tamin'ny taona 2020, afaho aho ary avelao handeha amin'ny anaran'i Jesosy. Manome didy aho fa ny herin'ny Avo Indrindra ho tonga amiko anio, ka ho tonga tsy azo sakanana amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Ray Tompo ô, ny mpiambina ratsy fanahy rehetra notendrena hanara-maso ny fitahiako tamin'ny taona 2021, dia manapa-kevitra aho fa ho jamba amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Tompoko, ny soratra masina dia milaza fa handeha eo alohanao aho ary hanao havoana toerana avo, hotapahiko ny varavarana na ny vy ary hotorotoroiko ny varavarana na ny saiko. Ray Tompo ô, mivavaka aho mba handeha eo alohako ianao amin'ny taona 2021 ary handrava ny olana rehetra napetraky ny fahavalo ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
Jesosy Tompo, hoy ny soratra masina, Izaho dia hamindra fo amin'izay hamindrako fo sy iantrako izay itiavako azy. Ray Tompo ô, miangavy aho fa amin'ireo olona ireo no hanana famindram-po amin'ny taona 2021, dia hevero ho mendrika amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Ny fahefana rehetra manafika ny olona amin'ny vanim-potoanan'ny fahombiazana, ny goavambe rehetra mijoro eo amin'ny lalantsara famakiana ny fandresena ny olona, ​​dia maty amin'ny anaran'i Jesosy ankehitriny.
Andriamanitra Andriamanitra ô, ny soratra masina milaza zavatra, dia ho tanteraka. Mandidy araka ny herin'ny Avo Indrindra aho, rehefa miditra amin'ny taona 2021 aho, mandeha amin'ny fahasoavan'Andriamanitra tanteraka. Rehefa miditra amin'ny taona 2021 aho dia mandika ny fetra. Tonga tsy azo sakanana aho amin'ny hery mametra amin'ny anaran'i Jesosy. Tompoko, rehefa miditra amin'ny taona 2021 aho, ny fahasoavan'Andriamanitra Tsitoha dia hiaraka amiko amin'ny anaran'i Jesosy.
vavaka ho amin'ny fahombiazana
Previous lahatsoratraTeboka vavaka hanoherana ny sakafo ratsy
Next lahatsoratraVavaka ho an'ny fandrosoana amin'ny 2021
Vavaky ny ady mba hanafoanana ny mpanohitra
Toro-hevitra momba ny fanafahana samirery
Janoary 23, 2019
300 Toro-bavaka hahazoana fitahiana ara-bola
Desambra 5, 2018
20 Manondro fanoherana ny ozona ny razana